Faux für Rug, Faux für Carpet, Faux hoditr'ondry Rug, Wool Rug - Wenwen
Shina ORINASA MPANAMBOATRA Wholesale tena Australian ...
Namboarina ririnina Luxury Real Long für Sheepsk ...
Home ravaka faux hoditr'ondry volony High lamba firakotra iadian-kevitra ...
Fashion mafana mivarotra Eco namana tanana volon'ondry karipetra
White marefo chaise longue hoditr'ondry lafika ...
Ambongadiny Aostralia hoditr'ondry iray tapa manontolo S ...
Tena nohetezana Wool hoditr'ondry Car Seza fisaka sy mivelatra
Real hoditr'ondry Wool Car Seza
Universal Full Set Long für hoditr'ondry Car Seza ...
Large habeny volon'ondry fotsy solon lambskin ela ...
A plush lamba izay mijery toy ny biby ny volony. Villi dia mizara ho roa sosona, ny sosona ivelany dia fahazavana ary ny aizim-mahitsy ohatra, ny ao anaty sosona dia tsara sy malefaka fibre fohy. Volony voajanahary dia matetika ampiasaina miaraka amin'ny akanjo, fitafiana linings, satroka, collars, kilalao, kidoro, ravaka anatiny, ary ny karipetra. Ny fomba ahitana orinasa mpamokatra entana knitting (weft knitting, ho an'ny tenany sy ny knitting hanjairana) sy ny fanenomana. Ny knitting weft knitting no fomba haingana indrindra Niroborobo Sady be mpampiasa indrindra ...
Ny fanisiana tombo-kase tombo-kase iray esory karazam-zavatra, ka tsy mora ny hamoha izy, ka dia milalao andraikitra eo amin'ny Taitra hisakana ny fiasan'ireny, tantera-drano, misy kilema insulation, hafanana insulation, vovoka ny fisorohana, sy ny fixation. Tombo-kase dia vita amin'ny fingotra, taratasy, vy, plastika ny fitaovana sy ny maro hafa. Hatramin'ny taona 1980, ny fingotra ravin tombo-kase no ampiharina amin'ny fiara, varavarana sy varavarankely, cabinets, vata fampangatsiahana, fitoeran sy ny orinasa hafa. Araka ny fepetra isan-karazany orinasa, dia lasa tsy manam-paharoa ...
Ny freeway guardrail dia ahitana roa mitafo fanitso guardrails vy sy tolana roa fixedly clamped eo amin'ny roa. Ireo lahatsoratra roa ireo clamped teo anelanelan'ny vy roa guardrails mitafo fanitso. Raha ny lalambe ao fandidiana ara-dalàna, ny guardrail azo mora foana nampidirina any an-mialoha nametraka fampidirana lavaky eo anoloan'ny varavaran'ny hiaro sy hatokana toerana ny guardrail avy any ivelany ny lalana. Tena fanamiana sy tsara tarehy. Rehefa ny fiara collides aminy, satria ny vy mitafo fanitso guardrail manana Imp tsara ...
Color mifono board
Cai Tuban, fantatra ihany koa ho toy ny volon'ny lovia, loko lovia. Ny loko vy mifono lovia na ny fanaka mangatsiaka-nanakodia vy lovia sy ny tafo vy vilia toy ny substrate, nampanaiky hipoitra teny ambony rano pretreatment (degreasing, manadio, simika fiovam-po ny fitsaboana), mifono iray mitohy fomba (-roller coating fomba), nanendy ary tony Products . Ny vy mifono lanjan'ny lovia manana fahazavana, tsara tarehy sy tsara tarehy harafesiny fanoherana, ary azo ampiasaina avy hatrany. Manome vaovao karazana akora ...
Araka ny tarehimarika avy any amin'ny Hebei Metallurgical Industry Association, avy Janoary hatramin'ny Febroary 2018, no tena fidiram-bola ny vy orinasa ao Hebei Province dia 156.106 miliara yuan, isan-taona-on-taona ateraky ny 5.03%, nampamoahana an'i 27.67% amin'ny faritany lehibe indrindra indostrialy raharaha fidiram-bola; ny tombom-barotra dia 9,84 miliara. Yuan, ny fitomboana 53,76% taona-on-taona, nampamoahana an'i 30,47% ny faritany tombony ny indostria. Ao amin'ny Janoary-Febroary vanim-potoana, ny raharaham-barotra tena fidiram-bola Ma ...